ကုရ်အာန်ကျမ်းလာစာ discussion | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကုရ်အာန်ကျမ်းလာစာ discussion
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 29, 2013 in Critic, Cultures, Opinions & Discussion, Science & Religion | 23 comments
မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုသလို ရွာထဲမှာ ရေငန်ပိုင် ဩဇီဦးဖောမွှေးတဲ့ ပို့စ်၅၃ ဘာသာရေးမီး လန့်နေခိုက် ကြုံဒိုးလေး ဖျာဝင်ခင်းပါရစေ…။ ကမာရွတ်မီဒီယာမှာ မေလ၂၆ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှားနေတာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာ ယူကြုမှာ ကြည့်ရတယ်။ သာဓု ခေါ်ကြောင်း အရင်ပြောပါရစေ..။ မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေက ကျမ်းစာနဲ့ ကျောင်းတော် ခွဲခြားသွားမယ်၊ ဘာသာခြားတွေနဲ့ ပွင့်လင်းရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်မယ်ပြောတယ်။ ပြင်ပလေ့လာလိုသူများအတွက် ဗလီဝတ်ကျောင်း တံခါးတွေ ဖွင့်ပေးထားမယ် စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ… ဝမ်းသာစရာ ကောင်းလှတယ်။
တခုထောက်ပြချင်တာ ကုရ်အာန်အသိပညာ ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးစန်းအောင် မြွက်ကြားသွားတဲ့ စကား တခွန်းဖြစ်ပါတယ်.. “အမျိုးသားတယောက်သည် (မွတ်ဆလင်) အစ္စလာမ်မဟုတ်သူ အမျိုးသမီးတဦးကို လုံးဝ လက်ထပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ” ဗလီတွေကနေ ဘာသာခြား မိန်းခလေးတွေကို ရအောင်ယူရင် ငွေပေးခြင်း မရှိကြောင်း တင်ပြသွားတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း မွတ်ဆလင်များအပေါ် အမြင်စောင်းစေတဲ့ အဓိကအချက်ထဲမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာထဲ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနဲ့ အတင်းသွပ်သွင်းကြောင်း စွပ်စွဲချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးခြင်းအမြင်အရဆို ဒါမျိုးဆိုတာ သူသူကိုယ်ကိုယ် ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောရှိလို့ ပြောရခက်ကြီးပါ။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ဘာသာထဲ ပြောင်းလာသူကို ပံ့ပိုးကူညီချင် ကြပါမယ်၊ လူဆိုတာ အတ္တမျိုးကိုး..။ အဲဒီကလွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ အောက်လမ်းနည်းသုံး ဆောင်ရွက်လာရင်တော့ လက်ခံလို့ မဖြစ်ဘူး..။
ဘာသာတိုင်းကတော့ ကိုယ့်သာသနာ ပြန့်ပွားရေး လုပ်နေကြတာချည်းပဲ…။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း အဆုံးအဖြတ် ကျပါမယ်… ခရစ်ယာန်တွေလောက် စည်းရုံးရေးလုပ်တာ ကမ္ဘာမှာ ရှိအုံးမလား။ ကိုလိုနီခေတ်ဦးပိုင်း ကာလမှာ အတင်းအကြပ် သွပ်သွင်းမှုတွေ နေရာအနှံ့ ရှိခဲ့တယ်၊ သို့ပေမဲ့ ဆိုင်ရာဒေသ လူမှုစီးပွား အကျိုးကိုပါ မြှင့်တင် ပေးနိုင်တော့ သိပ်မဆိုးဘူး ပြောရမယ်၊ ခေတ်ပြောင်းလို့ သခင်-ကျွန် ဆက်ဆံရေး မဟုတ်တဲ့အခါ အပျော့ဆွဲ နည်းလမ်းရွှေ့သွားတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေရေး ဦးစားပေးဆွယ်တယ်။ စစ်သွေးကြွဆိုတာ အလိုအလျောက် ဘလိုင်းကြီး ပေါ်လာတာ ဟုတ်ဖူးလေ.. ဆွပေး မြှောက်ပေးသူရှိမှ၊ စည်းရုံးလေ့ကျင့်ပေးသူရှိမှ၊ ကျောထောက် နောက်ခံရှိမှ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနိုင်တာ…။
အကြောင်းခံဇစ်မြစ် သိမှ ပြသနာ ဖြေရှင်းနိုင်တာမို့ အဲဒီစကားစုကို လေ့လာကြည့်ရင် မွတ်ဆလင် မဟုတ်ရင် ယူခွင့်မရှိ၊ အဲတော့ မွတ်ဆလင်များ ဘာသာခြားကို မကြိုက်တော့ မဖန်ကြတော့ဘူးလား..။ တဖက်လိင်သည် အစ္စလာမ် မဟုတ်ရင် ခြစ်ကြိုက်ခွင့်မရှိ မလိုက်နာရင် မွတ်ဆလင် မဟုတ်လို့ တားလိုက်မှ အဓိပ္ပါယ် ရှိမှာပေါ့။ အဲလို မဆိုတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ၊ ယူတယ်ဗျာ.. ကျမ်းစာညီအောင် ဘာသာထဲ အတင်းသွပ်သွင်းတယ်ဗျာ။ နို့မို့ရင် ယူလို့မရ၊ ယူပြီး ဘာသာမပြောင်းနိုင်ရင် ငရဲကြီးမယ်.. မွတ်ဆလင် အသိုင်းအဝန်းမှာ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင် ရှုံ့ချခြင်း ပေါ်တင်အလုပ် ခံရမယ်၊ မိမိတင်မက ကျန်ဆွေမျိုးသားချင်းများ မျက်နှာငယ်မယ်…။ အခုပြောတာက သိပ်ဝေးပါတယ်.. လက်တွေ့မှာ အဲလောက်ထိ မသွားဘဲ ငယ်စဉ်ဘာသာရေး သင်ကြားမှုကို ဥနှောက်စွဲနေရင် ဘယ်လိုလုပ် သွားရှင်းမလဲ..။ ဘာသာတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ အမွန်မြတ်ဆုံး ထင်ကြတယ်၊ သူများနဲ့ မရောနှော တဲ့အခါ ကိစ္စသိပ်မရှိဘူး.. ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဆစ်ခ်ဘာသာဝင်တွေဆို ကိုယ့်ဟာကိုယ် သီးခြားနေတာများတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် တဖက်လှည့် အားပေးအားမြှောက်ပြုရာ ရောက်နေမှာပေါ့။ တွေးမိတာလေး ပြောတာပါနော..
ကျနော့်ပုဂ္ဂလိက ဆန္ဒအရ ဘာသာတရားကို အမည်နာမတပ်ခြင်း အားမပေးလို….၊ ဖန်ဆင်းရှင်ယုံရင် ဖြစ်သမျှ ဘုရားသခင် အလိုတော်မို့ ကောင်းရင် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွှမ်း.. ဆိုးရင် သူ့အပေါ်ပုံချပြီးဖြေ..။ ကံယုံရင်လဲ ကောင်းမွေဆိုးမွေ အတိတ်ကံ အတိုင်းပေါ့ဗျာ.. ဒါဆို ဘာသာရေး ပြသနာ အတော်နဲသွားမယ် မှတ်တယ်….။ ဘာသာရေး အစွဲလန်းကြီးသူများကို အကြံပေးတာပါ။ ဘုရား၊ ဂိုဏ်းဂဏ သတ်မှတ်ချက်တွေထက် အဆုံးအမ ဓမ္မအတိုင်း နေထိုင်ကျင့်ကြံရင် ခေါင်းစဉ်တွေ မလိုဘူး.. လက်တွေ့မှာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ၊ ဒီတော့ တားမရ လုပ်ကြပေါ့ဗျာ..။
အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို၎င်း၊ မွတ်ဆလင်များကို၎င်း၊ ကုရ်အာန်အသိပညာပြန့်ပွားရေး အဖွဲ့ကို၎င်း စော်ကားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်အမြင် ဖလှယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူမှလည်း မှတ်ချက်ပြု ဝေဖန်ပါလျင် အပြုသဘောဆောင် ရေးသားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံသည်။
နောက်ဆက်တွဲ။ ဒီနေ့ လားရှိုး အဓိကရုဏ်းသတင်း ဖတ်ရတယ်။ ပို့စ်က မနေ့ထဲက ရေးထားတာ.. ဂေဇက် ဒေါင်းနေနေလို့ ခုမှတင်လိုက်တာ…။ လူမှုရေး အရှုပ်အရှင်းများဟာ ပြဿနာရဲ့ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်နေတာမို့ မွတ်ဆလင်လူဂျီးများ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားဖို့လိုနေပါပြီ။ ကျမ်းစာပါ မူရင်းစာမို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဆိုရင် အစ္စလာမ်တိုင်းပြည် အတော်များများမှာ ဖတ်တဝါခေါ်တဲ့ ဘာသာရေး အမိန့်ပြန်တမ်းတွေ တရားဝင်ထုတ်လို့ ရနိုင်ကောင်းပါတယ်။ ဂျီဟတ်လို စစ်ကြေငြာတာတောင် လုပ်လို့ရသေးတာပဲဗျာ.. အခြားလမ်းကြောင်းတွေလဲ ရှိနိုင်ကောင်းပါရဲ့…။
ရုပ်ရှင်မင်းသားရဲတိုက်နဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းက စိန့်မေရီဘုရား ရှိခိုးကျောင်း ပြဿနာလည်း ဖတ်ရတယ်။ ဘုန်းဂျီးကလည်း ဘုန်းဂျီး မင်းသားကလည်း မင်းသား… သာသနာ အရေခြုံပြီး ခွင့်လွှတ်စိတ်ဓာတ် မမွေးနိုင်ရင် ဘာလို့ ခရစ်တော်တပည့် ခံနေသေးလဲဗျာ….. ဂျီးဇက်က ဘာသာပြောင်းသွားသူကို အဲလို ခွဲခြားဆက်ဆံရမယ် မှာထားခဲ့လို့လား… ရဲတိုက်ကလည်း ဗွီဒီယိုထဲမှာ တွေ့ရတာ it is about love ဆိုပြီးတော့ ပြောနေလိုက်တာ ဒေါနဲ့မောနဲ့.. ဘာသာရေးနော် ဘာသာရေး.. ဖင်မနိုင် ပဲဂျီးဟင်း မစားကြပါနဲ့… ဗျားတို့နဲ့ ငရဲမှာ လူပြည့်ပြီး လူဇိုးတွေ လာလို့မရတော့ရင် ဒွတ်ခ….။
အချစ်အကြောင်းဒေါနဲ့မောနဲ့ ပြောနေဒါ တင်မကဘု မင်းသားပီပီ မထိအောင်လည်း ထိုးတတ်သေးတာကလား…။
ဟိုဟမ်ဘာဂါ ငုံထားသူယီးက တော့ ဒင်းလိုရုပ်မျိုးဒွေက ဒါမိုး အူကြောင်ကြောင်တွေချည်း ဒဲ့ ..။
အွန်လိုင်းမှာတော့ ကနားစီး မိဂီ ကအူးရှင်ကြီး ကို အေပရယ်စကိုင်း စောင်းနဲ့ တီးမပြလို့ ဆန်န ပြမယ်ဆိုလား..
နာ ချစ်လိုက်ရင်လည်း ဂလိုမိုးချီးပဲ။
ဘုရားကျောင်း ကြေညာချက်ကိုက သိပ်မဟုတ်ဘူးဗျ..
အရေးအသားက tone တွေ လွဲနေတယ်..။
လို့ ဆိုထားတာ တချက် (အပြစ်မကြီးကြီးအောင် လုပ်ချင်သလားကွယ်..ထားပါဦးဒါက သံသယ သက်သက်လို့..)
ဓါတ်တော် မွေတော်များထားရှိရာ သန့် ရှင်းသောနေရာများ
လို့ ဆိုတာထားတာ ဒုတိယတချက် (ခရိယာန်တွေ ဓါတ်တော် မွေတော် ကိုးကွယ်တာ ထားရှိတာ မကြားမိသလိုရယ်ပါ)
(ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဗျာ)ဘယ်နှရာစုက ဘယ်နာမည်ကြီးသာသနာပြုဆရာရဲ့ အရိုးအိုးထားရှိရာတို့ ဘာတို့ဆိုလည်း ရှင်းအောင်ရေးပေါ့နော..
အခွံတွေဖြစ်တဲ့ မင်းသား တို့ ကုလား တို့ ခန ဘေးဖယ်ထားပါဦး… ဒီ ၂ချက်ကို တမျိုးပဲလို့ ထင်မိတဲ့ အကြောင်း အောက်မှာ လာပါမယ်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည့် မတင့်တယ်သော အ၀တ်အစား(စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်) နှင့် ၀င်ရောက်ကာ
တဲ့ .. ဟုတ်ကဲ့ .. အစကတည်းက စွပ်ကျယ်နှင့် မ၀င်ရတို့ ဘာတို့ မရှိခဲ့ မဖော်ပြထားခဲ့ ဘဲနော..
ဒီဝယ်သာ ဒီတန်ပရေချာမှာ ဒီ အ၀တ်အစား ၀တ်တာ ..သရုပ်ပျက်သလားဗျာ..
အရင်းကို စစ်ရင် ခရိယာန် အ၀န်းအ၀ိုင်းကို မူစလင် ဘက်ဂရောင်းက လာတဲ့လူငယ်တယောက် ၀င်ရင်း ပြဿနာဖြစ်တာ
ဘယ့်နှယ့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်ဆွဲထည့်ရသလဲကွယ်…
အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ဗိမာန်တော်ကိုကျောပေးလျက်၊ မသင့်တင့် မလျောက်ပတ်မလျော်ကန်သောအပြုအမူမျိုး ပြုလုပ်ခြင်း၊ တဲ့ ဂျွမ်းထိုးတာလား .. လေးဘက်ထောက်လျှောက်သွားတာလား သီချင်းအော်ဆိုတာလား ..တခုခုပေါ့ ..အတိအကျပြောလေဗျာ..
စာထုတ်တယ် ဆိုတာ တိကျဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က Context ကျတော့ ထူးဆန်းသောဗိသုကာ တွေ ဓာတ်တော်မွေတော်တွေ
(မဆီမဆိုင်) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက် တွေပြောပြီး သူ့ဘက် က Action ကျတော့မှ မသင့်တင့် မလျောက်ပတ်မလျော်ကန်
ဆိုပြီး ၀ါးချထားတာ သိပ်တော့မဟုတ်သေးဘူး။
ကျန်သေးတယ်.. အသင့်ရေးလာသော ဆိုင်းဘုတ် ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံး ။ဥပဒေရေးရာ နားလည်သူတယောက် စီထားတဲ့စာ
ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ပေါ်ရဲ့..ပိတ်သတ်ကြီးသိတဲ့အတိုင်း လူသတ်မှုမှာတောင် ကြိုတင်ကြံစည်မှု နဲ့ ရုတ်တရက် တွေ့တာနဲ့
ဟုတ်ကဲ့ သည်တချက် ကို လက်ခံပါသည်။
အကြိမ်ကြိမ် မေတ္တာရပ်ခံ နေ သည့်ကြားမှပင်
နည်းနည်း ဆွဲချ လေပေါက်လာပြီခည။ ဆက်ဖတ်ပါဦးမည်။
သုံးကြိမ် သုံးခါတိုင်တိုင်ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းသည်၊ ကာယကံ ရှင်၏ စွပ်စွဲချက်နှင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင် နေသည်မှာထင်ရှားပါသည်။
အထက်ပါအပြုအမူများသည် ၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့် ကြိုတင်ကြံစည်ထား သည်ဟု ယူဆ နိုင်ပါသည်။ ဒါက အထင်ကိုရေးတာပါကွယ်…. အမှုရင်ဆိုင်ရမယ့်လူ အတွက် …ဘက်စုံ သက်သေစုံ မဟုတ်သေးတဲ့ တဖက်သတ် အမြင်ပါ။
လုပ်ပါဗျ … ဘယ်ဂျာနယ်က ဘယ်လိုရေးတာ မှားတယ် ဆိုပြီး ဒီတေးလ်လေး
ကျနော် ဖတ်မိသလောက် သတင်းဌာနတွေရဲ့ စာမျက်နှာမှာရော သတင်းထောက်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နေရာမှာပါ…
တဖက်စောင်းနင်း ရေးထားတာမျိုး မတွေ့မိပါဘူး။ ဘယ်သူ ဘယ်မှာ ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ် ဘာလုပ် ဘာ့ကြောင့်
ဆိုတာမျိုးပဲ ဖတ်ရပါတယ်။ အချုပ်ကိုပြောရရင် ဒီစာက ကိုယ့်ဘက်က သိပ်မှန်ပါတယ် သူကိုယ်က မှားတာပါ
လွန်ကို လွန်လွန်းနေတာပါ ဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ ရေးထားတဲ့ စာဖြစ်နေလေရဲ့…။
ဖတ်ရသလောက် ပေါ့ဗျာ .. မူစလင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ငဒို့ မင်းသား ကို သမပဟဲ့ ..တို့ ..သတ်ကြဖြတ်ကြတို့ မတွေ့ဘု။
ခရိယာန် အသိုင်းအ၀ိုင်းကလဲ အရူး အိမ်ဦးခန်း ချေးတက်ပါသလိုမျိုး စိတ်ဆိုးတာကလွဲရင် ဒါဟာ နောက်ကွယ်က တစုံတရာရှိလို့
ဘာညာ ဆူဆူညံညံမကြားကြဘူး .. ဗုဒ္ဓဘာသာဆြာသမားတို့သာ ဘာနဲ့ဘာကိုလှည့်တိုက်တာ ဘာညာသာဒကာ လုပ်ကြတာပါ။
အခုကျေညာစာကိုယ်တိုင်ကလည်း အမုန်းတွေ ပါနေသံကြားရရဲ့…။ ဆေးကွဲတာလည်းကွဲတာပေါ့ကွယ်…
ရေခဲတိုက်တို့မိုက်ချက်ကတော့ …ဘောင်းဘောင်းချွတ်တဲ့ မိုးအုပ်ဆင်းထက်တောင် မိုက်သေးး…ဟေဟေ့..။
ဒီ စကားလေးတွေ ညက ကြားလိုက်ရရင် နာ ပို အိပ်မပျော်ပေဘူးလား။
ရိုမန် ကတ်သလစ် ပရိုတက်စတင့် အင်ဂလိကန်
ဒီအကြောင်းဒွေပြောရင် အားသား ဘူလင်းဂဲလ်ထဲက စကားလက်လေး ပြန်သဒိယသွားပြန်တယ်ဗျာ…
အစ္စလမ်ဘာသာမှာလည်း. ရှီးယားနဲ့..ဆွန်နီဆိုပြီး.. ရှိတယ်..
ခရစ်ယန်ဘာသာမှာလည်း.. ပရိုတက်စတင်န့်နဲ့.. ရိုမန်ကက်သလစ်ဆိုပြီး.. ရှိတယ်..
အခြေခံကျကျပြောရရင်.. မူရင်းကျမ်းတိုက်ရိုက်ဖတ်ပြီး.. လေးစားလိုက်နာတာနဲ့.. ကြားခံပရောဖက်.. ဆရာတော်တွေ.. ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စကား..တရားတွေက(တဆင့်)လိုက်နာတာလို့.. (ပြောလို့ရမယ်လို့) မှတ်ဖူးတယ်..
မြန်မာပြည်က.. အစ္စလမ်သာသနာက.. ဘယ်ဖက်ကအများစုလည်းမသိ…
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက.. အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့.. ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးဖက်ကို… ဦးစားပေး.. ဆုံးမသင့်တယ်ထင်မိတယ်…။
ဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စစ်.. ဒေါသ.. အပူဟာ.. ဘယ်တော့မှမငြိမ်း.. မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကူးစက်တတ်တယ်လို့.. သတိထားသင့်လှတယ်..။
မနေ့က ရဲတိုက် ကို မြင်တော့ မိဂီ ကိုတောင် သွားမြင်မိတယ်.. ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး ရုပ်ဆင်လို့
အဲ့အဆင့်မာတင် ရပ်ပါကွယ်… အပေါင်းအသင်းဇုတ် တချို့လိုတော့ ညည်း-အစားဝင်လိုက်ပါလားဒေါ့မလုပ်ပါနဲ့
မိဂီလည်း ဒင်းလွတ်အောင် ကိုယ်တော်လေးကို မခိုင်းနေဘာဒယ်…
အကြောင်းရယ်ဖန်ကာ ဖြစ်ချင်လို့ ဖြစ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး၊
ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ ဖြစ်နေကြတာ လို့ဘဲ မြင်တယ်ဗျာ။
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ် ဆု အတွက် ကြောင်ကြီးအား ဆကာတင် ရွေးလိုက်ပြီ လို့ ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်ကနေ သဒင်း ရတယ်။
ရွာသူ/သားတွေကို ကြိုပြီး ကျွေးမွေးချင် ကျွေးမွေးထားလို့ ရသနော်။
နိုဘယ်ဆုအတွက် ဗုတ်ခိုင်းရင် ကြောင်ကြီးအတွက် တစ်မဲရပြီးသားလို့သာ တွက်လိုက်ပါ။
အောက်ကရေးထားသလို ကြိုတင်ကျွေးမွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒါနလေးမြောက်အောင် အားပေးပါ့မယ်။ :harr:
ကျုပ်သိသလောက်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ “ဆွန်နီ” ကများပါတယ်….
“အမျိုးသားတယောက်သည် (မွတ်ဆလင်) အစ္စလာမ်မဟုတ်သူ အမျိုးသမီးတဦးကို လုံးဝ လက်ထပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ”
အဲဒါတော့အမှန်ပါပဲဗျ…ဒါပေမဲ့ လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံနေတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ
တစ်ခုပဲ သူ့မိန်းမကတော့ ယောက်ကျားဖက်ကအမျိုးတွေနဲ့ ခပ်တန်းတန်းနေတယ်
တစ်ကယ်ကတော့ ဘာသာတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘာသာတူကိုသာယူကြဖို့
ကျုပ်အမြင်က အခုမွတ်ဆလင်မုန်းတီးရေးတရား ဖြန့်နေသူတွေစကားတွေဟာ
နဲနဲပိုလွန်းနေတယ်ထင်မိပါတယ်…ဥပမာ ၇၈၆ ဆိုတာကိုပဲ
ပေါင်းလိုက်ပြီး ၂၁ရာစုမှာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာ..လို့လုပ်လာတယ်…
ဘာသာမုန်းတီးရေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး…. ဒါပေမယ့် တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်…
အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်ဘက်က စလဲဆိုတာ ရှင်းပါတယ်… အဲဒီစတဲ့နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီး သူတို့အကွက်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့ ကိုယ်တွေဘက်ကလည်း အတော်ကို မှားပါတယ်… ဒါပေမယ့် သူတို့က အဲဒီလို ပြစ်မှုတွေ၊ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို စတင်ကျူးလွန်တာကို ကိုရမ်ကျမ်းစာက ဘာမှမပြောထားလို့လား..ဒါမှမဟုတ်..ကျမ်းစာလာအတိုင်း လုပ်တာလား… အခု လားရှိုးကိစ္စပေါ့..အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဘလိုင်းကြီး မီးရှို့တယ်.. မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက် မျက်လုံးတစ်လုံးချင်းဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ…. ကျမ်းစာမှာ အပြစ်ပေးဖို့ မပါဘူးလား… ဒါမှမဟုတ်..ကျမ်းစာမှာ မီးရှို့ခွင့်ရှိတယ်လို့ ပါလို့လား… ကျမ်းစာမူရင်းကို ဖတ်ချင်ပါတယ်… လင့်လေးလိုချင်ပါတယ်…
အခု ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ လုပ်နေတယ်ပေါ့… တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ရှိနေတာပဲ…. သူတို့ကနေ ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်လိုက်ပေါ့… သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ ဘယ်မွတ်စလင်မဆို ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုတဲ့ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စလုပ်ရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် အရေးယူပါမယ်ဆိုပြီး… အဲလိုဆိုရော မရဘူးလား…
နောက်..ဒါကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်က ဗုဒ္ဓခံတပ်ပေ့ခ်ျမှာ တင်ထားတာပါ.. ကူးယူတင်ပြပါသည်…
+++ ဘကတ တင်ထားတဲ့ပို့စ်ကို ကူးယူ၊ ဘာသာပြန်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်+++++
ကမ္ဘာကသိစေဖို့ အားလုံးဝိုင်းဖြန့်နိုင်ဖို့ရာ တတ်သလောက်မှတ်သလောက် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ နဲနဲကြားထားတာရှိတော့ နဲနဲဖြည့်စွက်ထားပါတယ်။
လားရှိုးကိစ္စဟာ တကယ်တော့ ဗလီနားက မူဆလင်ဆိုင်တွေက ကိုယ့်ဆိုင်ကိုယ် ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့တာပါဆိုတာ လားရှိုးက မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အခုတင်ဖုန်းဆက်ပြောပါတယ်။ အဲဒိမိတ်ဆွေက မူဆလင်ပါ။ …. သူကဆက်ပြောပါတယ် မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာ ဗလီဆရာတွေက မူဆလင်တွေအကုန်လုံးကို အိမ်တန်ဖိုးနဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းလိုက်ကောက်ထားပါတယ်တဲ့ …. အဲဒိစာရင်းတွေကို ရန်ကုန်ကနေတဆင့် ဆော်ဒီကသူဌေးဆီကိုပို့တယ်တဲ့ … မူဆလင်ကိစ္စပြဿနာဖြစ်တာနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးရှို့ပြီး ထွက်သာပြေးပြီးရင် ဗလီဆရာဆီမှာ စာရင်းပေးထားတဲ့အတိုင်း အိမ်တန်ဖိုးငွေပြန်ထုတ်ယူရတယ်တဲ့ …. အခုတော့ ဆော်ဒီကသူဌေးဆီကို စာရင်းလိမ်တင်တဲ့လူတွေများပြီး ဥက္ကံမှာလို ပြဿနာမဖြစ်ခင် အိမ်မီးရှို့ဖို့ ကြိုလုပ် ငွေထုတ်တာတွေကော၊ တကယ်မီးမရှို့ပဲ မီးရှို့စာရင်းပြပြီး ငွေထုတ်တာတွေကော ရှုပ်နေလို့ ဆော်ဒီသူငေဌးက ငွေထုတ်ပေးတာ ခဏရပ်ထားတယ်တဲ့။ …. အခုလားရှို့ဗလီနားက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မီးရှို့လိုက်တဲ့ဆိုင်ခန်းတွေက လူတွေ ဗလီဆရာဆီမှာ ငွေသွားတောင်းတော့မှ ဆော်ဒီသူဌေးက ဒီလိုရပ်နေတယ်ဆိုတာ သိရတာတဲ့။ … ဒီလူတွေငွေပြန်ရဖို့မသေချာဘူးတဲ့။…
Lashio case is just only arson of Muslim themselves, said by one of our friends from Lashio even who is Muslim. The informer continued that Muslim religious leaders from every township conducted assessment for asset of Muslim families which includes both price of house and other in-house materials like furniture, bed room materials, clothes and kitchen utensils. The Muslim religious leaders had to send assessment lists to Saudi after being verified by Yangon religious leaders. A group from Saudi which has been organized by Saudi top ten wealthy persons collects the list. The instruction is that as soon as the conflict broke out, Muslims have to burn their houses and to run away, then they could claim compensate money from Saudi control team via their township religious leader according the assessment list. But, for the time being, due to corruptions and fraud cases between Muslim civilians and religious leaders, some fake asset lists were found out and Saudi control team temporarily stopped cash distribution accordingly. During Oakkan conflict, they found that some Muslim families enrolled with price lists which doesn’t reflect their actual occupied assets and some claimed for compensate cash without doing arson. That’s why Saudi control team is still verifying the list of Oakkan victims and cash claim is currently under on-hold stage. Now, the shopkeepers from Lashio who arson themselves are in trouble since they have been made to be aware of it just today and also it is not sure to get back compensate cash.
ကိုကြောင်ကြီးပိုစ့်မို့ သူများနဲ့မတူအောင် ပြောဦးမယ်
(၀ိုင်းဆဲလို့ ပိုစ့်ရုပ်ဆိုးသွားလဲ သိပ်အားမနာလို့ပါ)
ဒီပြဿနာတွေဟာ ဘာသာရေးကို ရှေ့တန်းမှာထားလို့၊ ရှေ့တန်းတင်လို့
ဘာသာရေးကို နောက်တန်းမှာထားကြည့်ပါ၊ ဒုတိယတန်းမှာထားကြည့်ပါ…။
ဘာသာရေးတွေက ဥပဒေတွေကို မလွှမ်းမိုးပါစေနဲ့။ ဥပဒေတွေကသာ ဘာသာရေးအသီးသီးရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို လွှမ်းမိုးပါစေ..။
ဥပဒေတွေက ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတွေကို မညှိပါနဲ့ ချွင်းချက်မထားပါနဲ့။ ဘာသာရေးအသီးသီးရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကသာ ဥပဒေနဲ့ညီအောင် ညှိပါစေ။
မင်းတို့ဘာသာ ဘယ်ကျမ်းမှာ ဘာရေးထားထား၊ ဘယ်ဘုရားက ဘယ်လိုဟောဟော ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဒီဥပဒေအတိုင်းပဲ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်အောင် ပြုပြင်သင့်တယ်။ အဲသလိုပြုပြဖို့ ဒီအချိန်ဟာ အချိန်ကောင်းပဲ….။
ဘာသာရေးတွေကြောင့် လန်းနေ ငြိမ့်နေချိန်မှာ ဘာသာရေးတွေရဲ့ ခေတ်မမီ၊ တရားမျှတမှု့မရှိ၊ မမှန်ကန်တဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု့ကို ဖယ်ရှားရခက်တယ်။
အခုလို ဘာသာရေးကြောင့် လူတွေသေ မီးတွေလောင် ဒုက္ခတွေများ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှ ဘာသာရေးတွေရဲ့ ဥပဒေကိုကျော်လွန်လွှမ်းမိုးနေတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို တကြောင်းတည်းသော ဥပဒေအောက်ရောက်အောင် ဆွဲထည့်ဖို့ အဆင်ပြေမယ်….။
ှုဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိရေး – ဒို့အရေး
ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်အဆုံးအမ ဘယ်ဓလေ့ထုံးစံမှ မရှိရေး – ဒို့အရေး
ပေး … နေ့စားခ သုံးထောင်
Hammurabi’s Code: An Eye for an Eye [ushistory.org]
“An eye for an eye …” isaparaphrase of Hammurabi’s Code,acollection of 282 laws inscribed on an upright stone pillar. The code was found by French …
Code of Hammurabi – Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to Law – Law . Main article: Babylonian law. The Code of Hammurabi was one of several sets of laws in the ancient Near East. The code of laws …
ကျုပ်ဘယ်တုန်းကမှ ဘာသာရေးအကြောင်းကိုဝင်ပြောလေ့မရှိပေမည့် ခင်ဗျားအတည်ရေးလို့ ကျုပ်အတည်မန့်မယ်ဗျာ။ ကျုပ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှာ ၃နှစ်လောက် အလုပ်တာဝန်နဲ့ နေခဲ့ဖူးတာမို့ “ဆွန်နီ” အကြောင်း၊ “ရှီးယား” အကြောင်း တော်တော်တန်တန်သိတယ်ဆိုပါတော့။ “လူနည်းစု အခွင့်အရေး”လို့ ပြောနေကြတဲ့သူတွေကိုမေးချင်တယ်၊ မင်းတုန်းမင်းကြီး ဇရပ်တစ်ဆောင်လှုထားပါတယ်ဆိုတဲ့ မက္ကာအနားကို ခင်ဗျားတို့ကပ်လို့ရသလားလို့ပါ။ မြို့ဝင်တာတောင်မှ “မွတ်ဆလင်” မဟုတ်သူများက တခြားလမ်းကဝင်ရပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီးလန်းဖို့မစဉ်းစားနဲ့ ယှဉ်တောင်လမ်းလျှောက်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ဇနီးလည်း ကိုယ်သေသေခြာခြာမှတ်ထား “BURKA”ခြုံထားလို့ “STAR WAR” ဓာတ်ရှင်ထဲက “Darth Vader”ကြီးနဲ့မှားပြီး ပြေးပေါက်မှားနေဦးမယ်။
ဆိုပါတော့ဗျာ…. ၂၁ရာစုရောက်နေကာမှ ကမ္ဘာကြီးကို ၁၆ရာစုနှစ်က ဥပဒေအတိုင်းနေချင်သေးတယ်ဆိုတော့ တခြားဘာသာဝင်များနဲ့ ဝိရောဓိဖြစ်ဖို့ သိပ်မလွယ်သေးဘူး။ ဒီနေ့ “ငြိမ်းချမ်းသော”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာ “ဒေသံဒယ ပဋိပက္ခ”လို့ မြင်ဖို့ အရမ်းခက်နေပြီ…
ကိုင်း… “ဝ”ကတော့ပြောလိုက်ပြီမို့ “လု”အခွင့်အရေးသမားများ ဆဲကြစေသတည်း…
” ဒီနေ့ “ငြိမ်းချမ်းသော”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး
“ဒေသံဒယ ပဋိပက္ခ”လို့ မြင်ဖို့ အရမ်းခက်နေပြီ ”
မှန်ပါတယ် ။ ဒေသန္တရ ပဋိပက္ခ အဆင့်ကို ကျော်သွားပါပြီ ။
အမှန်တရားကို ဒဲ့ ပြောရရင် ၊
Muslim Vs Non-Muslim / မွတ်ဆလင် Vs မွတ်ဆလင် မဟုတ်သူ များ ၊
ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ် / လက်ခံပါတယ် ။
တစ်ကယ့်လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကို သေချာကွင်းဆင်း မလေ့လာပဲ ၊ search engine ထဲမှာ အချက်အလက် ရှာရင်တော့ မွတ်စလိမ် ဘာသာ ထဲကို အခုချက်ချင်း ကို ဝင်ချင်သွားနိုင်တာကလား
ဆီးရီးယား ထဲ ကို လက်နက် ရောင်းခွင့်ပေးလိုက်တာ တော်တော်ဝမ်းသာရတယ်
အမေရိက က အတိုက်အခံ တွေ ကို လက်နက် ဆပ်ပလိုင်း
ရုရှား က အစိုးရ ကို ဆပ်ပလိုင်း
အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့..ဆီးရီးယားအပေါ်.. လက်နက်ရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေစာရင်းကြည့်ရင်… ပြဿနာတွေဖြစ်အောင်..(တကယ့်အရင်းအမြစ်မှာ) ဘယ်သူတွေဖန်တီးလုပ်ကြသလည်း.. ခန့်မှန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
DPA Brussels/Beirut, May 28, 2013
British Foreign Secretary William Hague, left, talks with Belgium’s Foreign Minister Didier Reynders, during the EU foreign ministers meeting, at the European Council building in Brussels on Monday.
AP British Foreign Secretary William Hague, left, talks with Belgium’s Foreign Minister Didier Reynders, during the EU foreign ministers meeting, at the European Council building in Brussels on Monday.
The European Union decided Monday to lift its arms embargo on the Syrian opposition, the bloc’s foreign policy chief Catherine Ashton announced after hours of fraught negotiations, while ministers agreed not to supply weapons before August.
British Foreign Secretary William Hague — whose country had pushed with France foralifting of the arms embargo — said the decision senta“strong signal” to the regime of President Bashar al-Assad.
“This decision today gives us the flexibility in the future to respond toaworsening situation or to the refusal of the Assad regime to negotiate,” Mr. Hague said.
Vladimir Radyuhin MOSCOW, May 27, 2013
Moscow expects Tel Aviv to refrain from attacks on Syria
Inanew twist to the diplomatic game over the supply of deadly S-300 air-defence missiles to Syria, Moscow is reported to have again put the deal on hold.
An unnamed senior Russian official has been quoted by the British Sunday Times as saying the Kremlin has decided against supplying S-300 long-range missiles to Syria “for fear they could fall into the wrong hands and be used to attack civilian aircraft at Tel Aviv’s main airport”
ဦးပါ​လေရာ ရဲ့စကားကို​ထောက်​ခံပါတယ်​။ဥပ​ဒေရဲ့ အထက်​မှာ ဘာဆိုဘာမှမရှိ ရပါဘူး။
အပြစ်​ပြုသူဟာသူအပြစ်​အတိုင်း ​ဥပ​ဒေအရ အပြစ်​ဒဏ်​ကို ခံရသင့်​တယ်​။ကမ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘ္ဘာ​ပေါ်မှာ ရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်း
ဘာသာတိုင်းမှာ မ​ကောင်းတဲ့လူ​တွေအများကြီးရှိတယ်​။အဓိက ပြုလုပ်​တဲ့လူ​ပေါ်မူတည်​တယ်​။အဲဒီလူ
ဘာ ဘာသာ/ဘာလူမျိုး ဆိုတာအ​ရေးမကြီးပါ။
မသိ့လို့မေးပါဦးမယ်ဗျာ..ရွာထဲမှာ သူတို့(သူတို့နော်..တော်ကြာအညာသားကို သူတို့လို့ထင်နေဦးမယ်)ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ ဆိုတာကို သူတို့ဘာသာဝင်မဟုတ်ပဲ လေ့လာဖတ်ရှု့ဘူးသူ..သူကြီးအပါအဝင် ဘယ်နှယောက်များရှိ့လဲ..သိ့ချင်စမ်းပါ့..ရော့ဗျာ လေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက်..https://anonfiles.com/file/97a90f0680e50592407bd1179ae6a31a… အဲ့ဒါလေး ဒေါင်းလွတ်.ကျီးကန်းလွတ်ဆွဲ..မဆွဲချင်တဲ့သူတွေအတွက်.. ဒါလေးအသင့်ဖတ်.https://cdn.anonfiles.com/1366396502869.pdf..သေချာလေ့လာပြီးမှ့…အကောင်းအဆိုးပြောကြ.. ကျနော်ကတော့ဖတ်ဘူး..စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး.. မဝေဖန်ချင်ဘူး.. ကျနော်ဝေဖန်ချင်တာက. .မြန်မာပြည်မှာမွေး..မြန်မာ့ဆန်စား.မြန်မာ့ရေသောက်ကြီးပျင်းတဲ့ မြန်မာ စစ်စစ်ကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး.. သူတစ်ပါး နှိုင်ငံရောက်မှ့. .မြန်မာပြည် အကြောင်း အဝေးကနေ ဝေဖန်နေတဲ့.. .မြန်မာစင်စစ်..ကြီးမိုက်ကြီး.. ၂.ယောက်ကိုပဲ.. .ဒေါက်တာသက်တန့်ချိုရဲ့ ..ဆောင်းပါးလေးပေး ဖတ်ချင်တာပါ..
” ရွာထဲမှာ ရေငန်ပိုင် ဩဇီ ဦးဖောမွှေးတဲ့ ပို့စ် ၅၃ ဘာသာရေးမီး လန့်နေခိုက် ”
အင် ၊ ဦးကြောင်က အချွန် နှင့် လာမ နေပြန်ပြီ ။
သားသား က ၊
သူကြီမင်း ၊ ရွာသူားတွေကို ဘာသာရေး သွန်သင် ဆုံးမနေတာကို မကြည့်ရက်လို့ ၊
ကိုယ့် ဘာသာ ( ထေရ ဝါဒ ) နှင့် ပိဋကတ် သုံးပုံဘက်က နဲနဲလေး ကာပြောမိတာရယ်ပါ ။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အချင်းချင်း ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အကြောင်းပဲ ၊ ပြောနေကြတာပါကွယ် ။
သားသား ပြောတဲ့ အထဲမှာ သူများ ဘာသာ ( မွတ်စ် ) အကြောင်း တစ်ခုမှ မပါပါဘူးကွယ် ။
လူဇိုး ၊ သားသား ငြိမ်နေတာကို မကြိုက်ဘူးပေါ့ ။ လာဆွပေးနေတယ် ။